အဆိုပါ 8 အကောင်းဆုံး GMAT့Prep စာအုပ်များ 2018 ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူ
by လော်ရာ Dorwart
Biz ကျောင်းမှာစာရင်းသွင်းဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလား? ဤရွေ့ကားစမ်းသပ် prep စာအုပ်တွေကအမှန်တကယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်
ဒါကြောင့်သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျောင်းမှာစာရင်းသွင်းဖို့အဆင်သင့်ပါပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အခုဆိုရင်သင်တက်လေ့လာဖို့နှင့် GMAT များအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်ထိုအပိုင်းနှင့်အတူကူညီနိုင်သည်။ တစ်ဦးကအရည်အသွေးကို GMAT prep စာအုပ်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်ကိုသင်စာမေးပွဲများ၏နေ့၌မြင်ရပါလိမ့်မယ်အရာကိုအလားတူမေးခွန်းများကိုအဖြစ်သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်သင့်ဘတ်ဂျက်ကိုက်ညီမယ့်စျေးနှုန်းကို fit ကြောင်းမဟာဗျူဟာများပါဝင်သည်။ ဂိုးသွင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အနိုင်ရအက်ဆေးအတူပညာသင်ဆု secure သင်သည်သင်၏သင်္ချာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, တိုင်းပြည်အတွင်းထိပ်တန်းက MBA ပရိုဂရမ်များထဲကတစ်ခုသို့ရချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင်သည်ဤစာရင်းတွင်သင်တို့အဘို့အညာဘက်င်သော GMAT prep စာအုပ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ GMAT တရားဝင်လမ်းညွှန် (ရရှိနိုင်ပါသည် Kindle ပေါ်နှင့်ပုံနှိပ်၌) စာမေးပွဲများ၏အမှန်တကယ်စာရေးဆရာများကရေးသားထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်ဒီမှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်မေးခွန်းများကိုသင်အမှန်တကယ် GMAT အပေါ်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မြားရန်အလွန်ဆင်တူသည်။
အဆိုပါ GMAT တရားဝင်လမ်းညွှန်သင်ရသေးပုံစံသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာနှင့်အကျွမ်းတဝင်မရဆိုရင်အထူးသဖြင့်ထောကျအကူပွုသောစမ်းသပ်မှု၏အသီးအသီးအပိုင်း၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နှင့်အတူစတင်သည်။ အဆိုပါစာအုပ် 900 ကျော်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်မေးခွန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်းအဘို့အသေးစိတ်ဖြေကိုရှင်းလင်းချက်, အဖြစ် GMAT များ၏အရေအတွက်နှင့်နှုတ်ကဏ္ဍများကို လိုက်. တစ်ဦးပြည့်စုံသင်္ချာနဲ့သဒ္ဒါပြန်လည်သုံးသပ်ပါဝင်သည်။ သင်၏ဝယ်ယူမှုကိုလည်းသင်အထူးသဖြင့်အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကို fit ကြောင်းဉာဏ်စမ်းပဟေဠိသို့ compile နိုငျသောအလေ့အကျင့်မေးခွန်းတွေစိတ်ကြိုက်အစုံအပါအဝင်အဖိုးတန်အွန်လိုင်းအလေ့အကျင့်အရင်းအမြစ်များကိုမှ access ကိုပေးသည်။
သငျသညျထားပြီး GMAT quant အပိုင်းအပေါ်အလွန်အမင်းသွင်းယူကာတိုးတက်မှုရှာနေလြှငျ, မန်ဟက်တန့် Prep ရဲ့ GMAT အဆင့်မြင့် Quant သင်ထိန်းချုပ်မှုတွင်ပိုမိုခံစားရကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒီလမ်းညွှန်ထားပြီး quant အပိုင်း၏အခြေခံနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသောကျောင်းသားများ, ပြည့်စုံသင်္ချာမွမ်းမံမလိုအပ်ပါဘူး, နှင့် GMAT သင်္ချာအပိုင်းအပေါ်တစ်ဦး 650 သို့မဟုတ်အထက်ဂိုးသွင်းရန်ရှာကြသည်များအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။
အဆင့်မြင့် quant မှမန်ဟက်တန့် Prep ရဲ့လမ်းညွှန်အထူးသဖြင့်အဆင့်မြင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ဒေတာများဖူလုံရေး GMAT ပြဿနာများကိုသိမ်းပိုက်ဘို့ 250 ကျော်အလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကိုနှင့်မဟာဗျူဟာများပါဝင်သည်။ လူအားလုံးတို့သည်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်သင်စာမေးပွဲဖြေဆိုနေ့၌တွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်အများဆုံးရှုပ်ထွေး quant မေးခွန်းများကိုဆီသို့ဦးတည်ရည်ရွယ်နေကြသည်။ ဤစာအုပ်ကိုဝယ်ယူလည်းသင်အဆင့်မြင့် Quant Homework မှဘဏ်နှင့်အပိုအလေ့အကျင့်များအတွက်အဆင့်မြင့် Quant အပိုဆုလေ့ကျင့်ခန်းသတ်မှတ်မည်မှ access ကိုပေးသည်။
သင်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သောစာဖတ်သူနှင့်စာရေးဆရာနေရင်တောင် GMAT သဒ္ဒါစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်တင်ပြနိုင်ပါတယ်။ အလွန်တိကျသောသဒ်ဒါဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအထူးသဖြင့်နှုတ်ဖြင့်အပိုင်းအတွင်းဝါကျဆုံးမပဲ့ပြင်မေးခွန်းများကိုအတွက်စာမေးပွဲဖြေဆိုအပေါ်ကိုစမ်းသပ်နေကြသည်။ Dummy အဘို့အ GMAT အတွက်ထောက်ပံ့ပေးတနဲ့တူ (Kindle အပေါ်ရရှိနိုင်အဖြစ် paperback အတွက်) တစ်ဦးက GMAT-တိကျတဲ့သဒ္ဒါပြန်လည်သုံးသပ်, သင့်စိုးရိမ်မှုတွေအချို့လျော့ပါးသက်သာစေရန်နိုင်ပါတယ်။
သင်သည်အခြား, သိပ်သည်းစာမေးပွဲဖြေဆိုလမ်းညွှန်မှတဆင့်လုပ်ကိုင်ဖို့ဘယ်လိုသေချာမသိဆိုရင် Dummy အဘို့အ GMAT အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။ ဒါဟာအားလုံးလွင်ပြင်, စကားပြောဆိုမှုအင်္ဂလိပ်လိုပါပဲ။ စာမေးပွဲတစ်ခုပြီးပြည့်စုံခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပြီးနောက်, စာအုပ်ရဲ့စာရေးသူစမ်းသပ်ခြေလှမ်း-by-step အသီးအသီးစိတျအပိုငျးတစျဆငျ့သငျသညျယူပါလိမ့်မယ်။ သက်ဆိုင်ရာသဒ္ဒါသဘောတရား (နှင့်ပူးတှဲပါအလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကို) ၏သုံးသပ်ချက်ကို, ထိပ်တန်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာအုပ်လည်းငါး Full-အရှည် GMAT အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများ, ပုံနှိပ်နှစ်ဦးနှင့်အွန်လိုင်းသုံးနှင့်အပိုဆောင်းအွန်လိုင်းအလေ့အကျင့်ပစ္စည်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်ပါဝင်သည်။
အဆိုပါ GMAT ၏ဘက်ပေါင်းစုံကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းအပိုင်းသာ 2012 ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကတည်းကဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အားလုံးမဟုတ်အလေ့အကျင့်ပစ္စည်းများ In-depth အကြံပေးချက်များပါဝင်သည် (သို့မဟုတ်မည်သည့်အကြံပေးချက်များ, ထိုကိစ္စအတွက်) ဘက်ပေါင်းစုံကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းမေးခွန်းများကို Ace ဖို့ဘယ်လိုပေါ်မှာ။ သငျသညျ), Kindle နဲ့ပုံနှိပ်အဘို့အ McGraw-Hill ကပညာရေးရဲ့အောင်နိုင်သည့် GMAT သင်္ချာနှင့်ပေါင်းစည်းကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သင့်ရဲ့ GMAT အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှုအပေါ်ရေတိုပေမယ့်ရှုပ်ထွေးမှာ IR အပိုင်းနှင့်အတူဒုက္ခရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ GMAT prep စာအုပ်စုဆောင်းခြင်းမှကောင်းတစ်ထို့အပြင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ စာအုပ် GMAT သင်္ချာမှအကြီးအကျယ်ကျိန် ဆို. ပူဇော်ဖြစ်သော်လည်းကြောင့်လည်းစျေးကွက်အပေါ်ဘက်ပေါင်းစုံကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းအပိုင်းအရှိဆုံး In-depth ကိုလမ်းပြတစ်ဦးပါဝင်သည်။
အဆိုပါမှာ IR အပိုင်း ပတ်သက်. trickiest အရာကတစ်ဦးချင်းစီဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမျိုးစုံအစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်ခြင်းနှင့်ဆင်ခြင်ခြင်း၏မျိုးစုံမျိုးလိုအပ်ခြင်းနှင့်အတူ, ဘယ်လောက်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ prep စာအုပ်၏စာရေးသူကိုသင်ရှုပ်ထွေးဘယ်တော့မှပါပဲဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများသို့နမူနာမှာ IR မေးခွန်းများကိုဖြိုဖျက်နှင့်သင်လေ့လာသင်ယူပြီးပြီဘယ်အရာကိုကျင့်သုံးနိုင်အောင်ဥပမာမေးခွန်းများကိုအမျိုးမျိုးအားဖြင့်သင်တို့သွားလာရကြ၏။ အဆိုပါစာအုပ်နှစ်ဦးကိုအပြည့်အဝ-အရှည် GMAT သင်္ချာအလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများနှင့်နှစ်ဦးကိုအပြည့်အဝ-အရှည် GMAT ဘက်ပေါင်းစုံကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းအလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများပါဝင်သည်။
သငျသညျမရရှိနိုင်ပါလေ့လာမှုအချိန်ပေါ်အနိမ့်အနေနှင့်စမ်းသပ်မှုအဘို့အပြွတ်သိပ်ဖို့လိုအပ်ပါက, Brandon ဝူရဲ့ 30-Day ကို GMAT အောင်မြင်နေတဲ့အဖြစ်တော့၌သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်။ အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွင်း GMAT ရန်ပြည့်စုံလမ်းညွှန်ပေးဖှဲ့စညျးထား, ဒီ prep စာအုပ်အထူးသဖြင့်လက်လှမ်းနှင့်စုပ်ယူရန်လွယ်ကူသည်။
က Semi-အပူတပြင်းကာလ၌သင့်ကိုကူညီဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်သောကြောင့်, 30-Day ကို GMAT အောင်မြင်မှု - က Kindle အဘို့နှင့်သို့မဟုတ် paperback form မှာဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ရာ - ကျွမ်းကျင်မှု-အဆောက်အဦထက်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်ပေါ်မှာပိုပြီးအလေးပေး။ GMAT စကားထူးအသိအမှတ်ပြုအတူရုန်းကန်? သည်တစ်ဦး cheat sheet ရှိပါတယ်။ အားလုံးသက်ဆိုင်ရာ GMAT သင်္ချာဝေါဟာရများကိုသတိရသည်မဟုတ်လော သည်တစ်ဦး cheat sheet လည်းရှိပါတယ်။ (သင်ကစိတ်ကူးရ။ ) အဲဒီမှာအလေ့အကျင့်မေးခွန်းများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းမဟာဗျူဟာဒီမှာပါ, သို့သော်ဤစာအုပ် ပတ်သက်. ထူးခြားသောအရာကသင်မှန်သငျသညျအမြားဆုံးလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရာကိုအမဲသားကိုရရန်ပိုလျှံမှတဆင့်ဖြတ်ကူညီပေးသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
GMAT စမ်းသပ်-takers မကြာခဏအရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုအချို့ကိုဖြစ်ဖို့အရေးပါဆင်ခြင်ခြင်းမေးခွန်းများကိုရှာပါ။ အထူးသဖြင့်, သူကတစ်ဦးအငြင်းအခုံအပြစ်အနာကြောင်းသာသိရန်ခက်ခဲပေမယ်တိကျစွာအဘယ်ကြောင့်။ PowerScore ရဲ့ဝေဖန်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သမ်မာကမျြး၎င်း၏ GMAT နှုတ်ဖြင့်သမ်မာကမျြး Trilogy ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုသင် GMAT အပေါ်တစ်ဦးချင်းစီအငြင်းအခုံဖြိုဖျက်ကူညီခြင်းနှင့်အတိမ်အနက်ကို၌ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်, ကျောင်းသားများသူတို့ PowerScore ရဲ့ prep မဟာဗျူဟာများ အသုံးပြု. ပြီးနောက်တစ်ဦးချင်းစီ GMAT ဝေဖန်ဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပေါ်ဖြုန်းအချိန်ပမာဏကိုအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရေးသတင်းပို့ပါ။
အဆိုပါစာအုပ်ဝေဖန်ဆင်ခြင်ခြင်း GMAT မေးခွန်းတစ်ခုကို, သင် GMAT အပေါ်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ယုတ္တိမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုမျိုးအဖြစ်မှန်ကန်သောသူတွေကိုထံမှဘုံထောင်ချောက်အဖြေတွေကိုခွဲခြားဖို့ဘယ်လိုပေါ်နေတဲ့လမ်းညွှန်၏အသီးအသီးမျိုးကိုတစ်အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါဝင်သည်။ သင်ဤစာအုပ်ထဲတွင်သင်ယူအဆိုပါမဟာဗျူဟာကိုလည်း GMAT ဝေဖန်ဆင်ခြင်ခြင်းမေးခွန်းများကိုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအရေးအသားအကဲဖြတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်။ သင်၏ဝယ်ယူမှုကိုလည်းသင်အွန်လိုင်း PowerScore GMAT အလေ့အကျင့်အရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးမျိုးမှ access ကိုပေးသည်။
အဆိုပါ GMAT အက်ဆေးချဉ်းကပ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုစိုးရိမ်နေပါသလား တက်ကြွထုတ်ဝေသူများ GMAT Analytical Writing: အရီးရဲလ်အငြင်းအခုံခေါင်းစဉ်မှ Solutions သင် GMAT အက်ဆေးညွန်ပြမှအောင်မြင်သောတုံ့ပြန်မှုများအတွက်လိုအပ်သမျှနမူနာကိုငါပေးမည်။ ဒါဟာအလှနျတနျဖိုးနှင့် GMAT အက်ဆေးနေတဲ့ပြည့်စုံလမ်းညွှန်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါစာအုပ်သင်တို့နှင့်အတူလေ့ကျင့်အဖြစ် Pre-အရေးအသားလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးမျိုးမှတစ်ခုအငြင်းအခုံနမူနာပြ Analyze ခြောက်ဆယ်တို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါစာအုပ်ရဲ့စာရေးဆရာ, ပေးထားသောအငြင်းအခုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာယင်း၏အရေးပါအားနည်းချက်တွေကိုနေရာချထားခြင်းနှင့်လက်မှာအငြင်းအခုံကိုခိုင်ခံ့စေမယ်လို့အခြားနည်းလမ်းအဆိုပြုဖို့နည်းလမ်းတွေမှတဆင့်သင်ကယူပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျတိုးအဖြစ်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရေးအသားအကဲဖြတ်ရန်အဘို့အ GMAT သရုပ်ခွဲရေးသားခြင်းလည်းအမှတ်ပေးလမ်းညွှန်ပေးပါသည်။
သင်သည်အမှုရောက်သောအချိန်မီထုံးစံ၌ comprehension ကျမ်းပိုဒ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ထွက်ကောက်နေ GMAT မှတဆင့်ရတဲ့ရှိပါကအဆိုပါ PowerScore စာဖတ်ခြင်းနားလညျမှုသမ္မာကျမ်းစာ godsend ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါစာဖတ်ခြင်းနားလညျမှုကမျြးစာကိုအထူးသဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်အတူနမူနာကျမ်းပိုဒ်, မေးခွန်းများကိုနှင့်တစ်ဦးချင်းစီဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအမျိုးအစားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလည်းပါဝင်သည်။
အဆိုပါ GMAT စာဖတ်ခြင်းနားလညျမှုကမျြးစာအသငျသညျ၎င်းငျး၏သက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများသို့ comprehension ကျမ်းပိုဒ်ကိုဖတ်ရှုခြင်း၏အသီးအသီးမျိုးကိုဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်သင်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ထိရောက်စွာကြောင့်အကဲဖြတ်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဖတ်ရှုခြင်း comprehension ကျမ်းပိုဒ်, မေးခွန်းများ, နည်းဗျူဟာများနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ကိုအမြည်းငှါ, စာဖတ်ခြင်းနားလညျမှုကမျြးစာကအပိုဆောင်းအွန်လိုင်းအလေ့အကျင့်ပစ္စည်းများနှင့်အကြံပြုချက်များကိုရယူသုံးစွဲနိုင်ပါဝင်သည်။
မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲ့ Expert စာရေးဆရာများသင်၏အသက်တာနှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များ၏စဉ်းစားဟန်နှင့်အယ်ဒီတာ့အာဘော်လွတ်လပ်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းမှကျူးလွန်နေကြသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်သင်ကိုကော်မရှင်ဝင်ငွေငါတို့ရွေးကောက်တော်မူလင့်များအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ။ အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ် ။
High School တွင်ကျောင်းသားများသည်ကို Creative Writing prompt
Vocab အလေ့အကျင့်သင်ထောက်ကူစာရွက် 1
သင်ထောက်ကူစာရွက်2ပင်မ Idea ရှာဖွေခြင်း
Intercollegiate တစ်ဦးက Cappella များအတွက်ထိပ်တန်းကောလိပ်များ
ဂျူပီတာလက္ခဏာများ - သင်၏တောက်ပစတား
Puget အသံ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်
ယင်းထိပ်တန်းပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်များများအတွက်ပျမ်းမျှ GRE ရမှတ်
Samstag, Sonnabend နှင့် Sonntag အကြားခြားနားချက်
တစ်ဦး Testable Hypothesis ဆိုတာဘာလဲ
အဆိုပါ 2000 ပြည့်နှစ် 100 အကောင်းဆုံး Rap ဂီတသီချင်းများ
Anasazi Timeline ကို - ထိုဘိုးဘွား Pueblo ပြည်သူ့၏မှတ်တမ်း
'' ဒီဖန် Menagerie '' ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
လူးစ Hendrix နဲ့ Kurt Cobain အကြား 10 ထူးခွားအလားတူ
Shawnee အဘိဓါန်မြေအိုး: အချက်အလက်, အသေးအဖွဲနှင့်စုပေါင်း
အီတလီအတိုကောက်အဘိဓါန်: အရွယ်ရောက် '' အက်ဖ် '' စကား
19 ရာစု၏မှတ်သားလောက် Authors
ဂေါက်ကွင်းအတွင်း '' ပွင့်လင်းမျက်နှာ '(သို့မဟုတ်' ပွင့်လင်း Clubface ') ကိုရှင်းပြ
Sagittarius နှင့် Sagittarius မတ်ေတာသအသုံးပြုပုံများ